Semalt: Azontsika atao ve ny mijanona ny motera Search avy amin'ny fanodinana pejy manokana ao amin'ny WordPress?
Raha namorona tranonkala vaovao ianao, dia tsara ny manakana ny rindranasa fikarohana tsy hikirakira sy hitazona ny tranokalanao raha tsy efa voaomana tanteraka.
Mankanesa any amin'ireo torohevitra notontosain'i Ross Barber, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , raha toa ianao ka misarontana amin'ny fomba hisakanana ireo milina fikarohana amin'ny fampidirana ny tranokalanao.
Ny mpitsikilo finday mikaroka ny tranokalanao mba hamehezana ny pejiny ho an'ny fanondroana. Ny ankamaroan'ny webmasters dia velom-pankasitrahana satria fantany fa ny endriky ny fikarohana dia mikaroka ny pejin-dry zareo, saingy misy fotoana izay tsy hisakanana ny pejy Internet anao.
Mampalahelo fa tsy misy safidy amin'ny WordPress izay mamela anao hanakana ny pejinao tsy hikorontana. Ny hany safidy anananao dia ny mamela ny fitadiavana hikaroka ny zava-drehetra, ary tsy misy tavela intsony. Ny fijanonana an'i Google, Bing, ary Yahoo amin'ny fikajiana ny tranonkala dia ilaina raha tsy voaomana tanteraka.
Ohatra, raha manana blôgy izay misy pejy vitsivitsy tsy misy votoatiny ianao dia ho tsara ny hampiato ny milina fikarohana amin'ny fampidirana ny tranokalanao mandra-pahavitan'ireo pejy ireo. Ny bilaogy sy tranokala samihafa dia tsy manakana ny fitaovam-pikarohana tsy hikirakirana ny pejy Download.
Midika izany fa maro kokoa ny olona afaka maka ny eBooks, ny rakitra dizitaly, ary ny haino aman-jery hafa na dia tsy vonona ny hamoaka ny tranonkala aza. Azon'izy ireo atao ny mandefa ny fitaovana amin'ny pejy manokana sasany amin'ny fanaovana fikarohana an-tserasera. Raha te-hampijanona ireo milina fitadiavana amin'ny fisiahana ny pejy sy ny lahatsoratra ianao, dia tokony hahatsiaro ireto fomba manaraka ireto.
Ampio ny tags Meta Robots ho an'ny lohan'ny Theme
Azo atao ny manakana pejy maromaro avy amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenifototra WordPress..Mba hahazoana ny vokatra tadiavinao dia tokony hampiasa ny mari-pitsipi-po mety ianao. Ohatra, raha te hanakatona ny lahatsoratra tokana, dia ampiasaina ny marika (is_single), ary raha te hanakana pejy ianao, dia ny (is_page) dia ampiasaina amin'io pejy WordPress io. Zava-dehibe ny manampy ny code amin'ny sehatra header amin'ny loha-hevitra loharano.php.php. Azonao atao ny mampiasa marika samy hafa amin'ny pejy samihafa, rehefa ilaina izany.
Misy fomba telo hanampiana ireo meta meta ao amin'ny tranokalanao amin'ny fanovana ny template header.php. Ny ampahany tsara indrindra dia ny hoe ny vokatr'ireo fomba rehetra ireo dia mitovy, fa afaka misafidy ny fomba izay hitanao fa mora kokoa noho ny hafa. Mba hanakanana pejy manokana na lahatsoratra, tokony hanana ny ID ianao ary hanitsy izany. Rehefa mifidy ny ID amin'io lahatsoratra na pejy io ianao, dia ho afaka hampiato ny karoka fitadiavam-baovao ianao. Azonao atao ny mampiditra rohy YouTube ao amin'ny bar of the browser. Ny fomba faharoa dia amin'ny fampidirana fehezan-dalàna manokana ao amin'ny loha-lohateny amin'ny template header.php. Ity fango ity dia manondro ny ID handefasanao hosakanana. Azonao atao ny manakana pejy maro raha te hampiasa ity fomba ity ianao. Ny fomba fahatelo sy farany dia mampifanaraka ny zava-drehetra. Ny fanakanana ny isa marina sy ny lahatsoratra dia zava-dehibe. Raha nampidirinao tsara ilay fitsipika, dia azonao jerena ao amin'ny fizarana lohatenin'ity pejy ity.
Ampiasao ny safidy sahanin'ny WordPress
Ny fomba fahatelo sy tsy mahazatra dia mampiasa ny safidy sahanin'ny WordPress. Ity fomba iray ity dia iray amin'ireo tsara indrindra sy mahomby indrindra. Voalohany indrindra, tokony hanisy fehezan-dalàna iray manokana ianao ao amin'ny faritra fanalahidin'ny faritra header.php. Raha vantany vao nampidirina ity kaody ity, dia tsy afaka manova izany ianao mandra-pahatongan'ny tranonkala vonona ny hiditra tanteraka.
Tsapako fa ireo teknika etsy ambony ireo dia mora ampiasaina ary mora ny manamboatra ny mpanjifanao. Raha mampiasa ny iray amin'ireto fomba ireto ianao amin'ny fanakanana pejy marobe sy lahatsoratra tsy ahazoan-dàlana, dia tokony hamorona tahiry ahodin-drakitra amin'ireo pejy ireo ianao ary mariho ireo izay tianao hikatona Source .